Global Voices teny Malagasy » Notànan’ny Polisy Thailandey Ireo Mpianatra Mpanao Fihetsiketsehana Nandritra Ny Tsingeritaonan’ny Fanonganam-panjakana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Jona 2015 13:56 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Thailandy, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Sivana, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
Mpianatra mitangorona ao amina kianja nandritra ny tsingerintaonan'ny fanonganam-panjakana. Nosamborin'ny polisy izy ireo avy eo. Sary tao amin'ny pejy Facebook-n'ny LLTD
Mpianatra am-polony no nosamborina tao Thailand noho ny fanaovana fihetsiketsehana  nandritra ny tsingerintaona voalohan'ny fanonganam-panjakana May 2014. Tamin'ny fotoana nanoratana, 48 no nogadraina  noho ny fanehoan-kevitra ampahibemaso manohitra ny governemanta tohanan'ny miaramila.
Nanatontosa fanonganam-panjakana ny tafika tamin'ny 2014 mba hamaranana ny korontana ara-politika ao amin'ny firenena. Nofeheziny ny haino aman-jery ary noraràny ireo fihetsiketsehana ka anisan'izany ny fitangoronan'ny olona mihoatra ny dimy eny amin'ny toerana an-kalamanjana. Talohan'ny faran'ny taona 2014, novolavolainy ny sata vonjimaika fototra ametrahana governemanta sivily tarihin'ny miaramila voatendry. Ny lehiben'ny tafika, Prayut Chan-o-Cha no voafidy  ho praiminisitra.
Na dia teo aza ny fandraràna napetraky ny tafika, Thailandey maromaro, indrindra fa ny tanora no nitaky ny famerenana ny demokrasia amin'ny laoniny ao amin'ny firenena. Nitaky hatrany ny fiverenan'ny haino aman-jery malalaka, fifidianana misokatra sy fitondrana sivily izy ireo
Hoy ny vakin'ny sora-baventy “Tohero ny fanonganam-panjakana”famoriam-bahoaka @ Khon Kaen
Nofoanan’ ny tafika ny lalàna miaramila tamin'ny volana Aprily saingy mbola tazoniny ny fahefana tsy voafetra ao amin'ny governemanta.
Nitanisa ny sasany tamin'ireo asan’ny miaramila tamin'ny herintaona izay nanohintohina ny zon'olombelona ny vondro-pikarohana iLaw:
Taorian'ny fanonganam-panjakana, olona 751 farafahakeliny no nahazo fampiantsoana avy amin'ny NCPO [anaran'ny governemanta tohanan'ny miaramila]. Raha kely indrindra dia 424 no nalàna zo halalaka. Ny sasany voatery niaritra “fanovana fihetsika” mba hampianatra azy ireo indray ny tsy maintsy nandrombahan'ny miaramila ny fahefana ary hamotsotra azy avy eo. Mandritra izany fotoana izany, 163 raha kely indrindra no voateritery amin'ny fiampangana ara-politika. Hetsi-bahoaka 71 kosa farafahakeliny no nidirana an-tsehatra na nofoanana tamin'ny alalan'ny fampiasana hery miaramila.
364 andro taorian'ny fanonganam-panjakana, olona 428 farafahakeliny no voasambotra, sivily 124 niakatra Fitsarana Miaramila
Nitsikera  ny fitsipika tafahoatran'ny tafika ilay mpanao gazety Saksith Saiyasombut :
Tsy vitan'ny mpampianatra tsy mendrika manantena ny mpianatra hitadidy zavatra am-pankatoavana, fa tahaka ny mpitaiza zaza manara-maro tafahoatra anay isaky ny dingana atao.
Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo sarin’ny mpianatra voasambotry ny polisy omaly:
Nolazain'ny polisy fa nogadraina noho ny “fitondratena mampidi-doza”
Notanana ireo mpianatry ny oniversite Khon Kaen 13 noho ny fanaovana fihetsiketsehana manohitra ny fanonganam-panjakana tamin'ny 22 May
Manomboka misambotra ireo mpianatra tsy mahery setra ny polisy
Notànana tao amin'ny tobin'ny polisy ihany koa ireo mpikatroka avy ao Permas (mpianatra sy tanoran'i Patani)
Nilaza ny mpianatra fa tsy niraharaha ireo namany mpikatroka mila fanaraha-maso ara-pahasalamana ny polisy.
Vondrona miantso ny tenany hoe Tanora hoan'ny Hetsika Sosialy-Demaokrasia (YPD) namoaka  fanambarana manohitra ny fitondrana mpanongam-panjakana:
Tsy afaka manorina fiarahamonina demokratika izahay raha tsy manana fahalalahana, fahafahana, zo, ny rariny ary ny fampihavanana. Mino izahay fa tsy ho teraka ao anatin'ny tsy fisian'ny fanoherana ny fandriampahalemana eo anivon'ny fiarahamonina. Ao anatin'ny fitoviana sy ny rariny eo amin'ny lafiny fahefana, toe-karena sy ny politika ihany no ivoahan'ny fandriampahalemana eo amin'ny fiarahamonina.
Herintaona taorian'ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika, mbola miaritra ny korontana ara-politika i Thailand. Mila fitoniana amin'ny fifandirana tsy ankiato ataon'ny mpanao politika ny olona fa tsy sandaina amin’ny fitondrana miaramila izay mailaka amin'ny fanafoanana fahalalahana sivily.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/06/04/70468/
 fanonganam-panjakana : https://globalvoicesonline.org/2014/12/30/thailands-12-tumultuous-months-in-2014/
 nitaky : https://globalvoicesonline.org/2014/10/30/thailands-high-school-civic-activism-in-a-time-of-martial-law/
 Nitanisa : http://freedom.ilaw.or.th/en/blog/364-days-after-coup-report-situation-freedom-expression-thailand